Hire Purchase | GIF
Long Term Staff Loan
Hire Purchase (အငှားဝယ်ယူခြင်း)
အလယ်အလတ်တန်းစား ဝင်ငွေရရှိနေသောဝန်ထမ်းများ၏ လူနေမှုဘဝအဆင့်အတန်းကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်ရန်နှင့် မိသားစုမတွက်လိုအပ်နေသောအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို အခက်အခဲမရှိငွေကြေးအလုံးအရင်း ကုန်ကျခံစရာမလို ပဲအရစ်ကျပေးဆပ်သည့်စနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ရန်။
GIF ကုမ္ပဏီနှင့်တစ်ကွ ညီနောင်ကုမ္ပဏီများ၊ ချိတ်ဆက်ထားသော ကုမ္ပဏီများအပြင် တစ်သီပုဂ္ဂလကုမ္ပဏီများရှိ ဝန်ထမ်းများအတွက် အိုးအိမ်၊ တိုက်ခန်း၊ ကားများအား အရစ်ကျစနစ်ဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်သည့်အပြင် Electronic နှင့်အခြား အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို GIF နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောဆိုင်များတွင် အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူခွင့်ပြုထားပါသည်။သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီ HR ဌာန၏ အရာရှိထောက်ခံချက်၊ သန်းခေါင်စာရင်းမူရင်း၊ မှတ်ပုံတင်မူရင်း၊ ရပ်ကွက်ထောက်ခံ စာနှင့်အာမခံသူနှစ်ဦး၏လက်မှတ်များအပြည်အစုံပါရှိရမည့်အပြင် အရစ်ကျပေးဆပ်သည့်ကာလအတွင်း၌ သက်ဆိုင် ရာပစ္စည်း၏ အာမခံနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုစာချုပ်များအား GIF တွင်ထိန်းသိမ်းထားရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
ချေးငွေကျပ် အနည်းဆုံး ကျပ်တစ်သိန်းမှ အများဆုံးကျပ် သိန်း (၃၀၀) အထိခွင့်ပြုပေးပါသည်။
ပစ္စည်းတန်ဖိုး၏ (၃၀%) အား လက်ငင်းပေးချေရပါမည်။
အရစ်ကျ ပေးဆပ်ခွင့်ပြုကာလမှာ (၁၂)လ၊ (၂၄)လ၊ (၃၆)လ သတ်မှတ်ထားပါသည်။
ဝန်ဆောင်ခအဖြစ် ချေးငွေအပေါ်တွင် (၁%) ပေးသွင်းရပါမည်။
Global Innovations Finance Company Limited offer the hire purchase program for you and your families to purchase the items that you and your families need and to life the living standard up without to pay inalarge amount.
Building 16, #4-01, MICT Park, Hlaing University Campus,
Hlaing Township, Yangon, Myanmar.
Tel : +959253226006, 01-2305241,
© Copyright GIF2019. All Right Reserved.